အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် စာတန်ကသင့်အားအစာမရှောင်စေလိုသည့်အကြောင်းတရား | Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions! | Real Conversion
ဇူလိုင်လ ( ၁၉ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ်သို့ သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိူင်။" (မာကု ၉း ၂၉ )
ကျွနု်ပ်သည် အခြားတရားဒေသနာတစ်ခုကို ဟောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ယနေ့ ညတွင် သာ၍များစွာသောအချက်ကိုပြောပါမည်။ ကျွနု်ပ်သည် မှန်ကန်သောအရာကို လုပ် ဆောင်ရပါမည်။ အကြောင်းမှ ကျွနု်ပ်သည် စာတန်၏တိုက်ခိုက်ခြင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်ကထက် ဤတရာဒေသနာ ပြင်ဆင်မှုက ကျွနု်ပ်အတွက် သာ၍ခက်ခဲလှပါသည်။ အချက်တစ်ခုတွင်ဖြင့် စာတန်က ကျွနု်ပ် ကို တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်သည်ဟု ပင်ခံစားခဲ့ရသည်။ အချို့သောသူများ ( အချို့သောတရား ဟောဆရာများပါ၀င်နိူင်) တို့က ကျွနု်ပ်သည် ချဲ့ကားပြောသည်ဟု ထင်မည်ကို ကျွနု်ပ်သိသည်။ သို့ရာတွင် ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်။ လွန်ခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ညကစလို့ နတ်ဆိုးများ၏ တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရသည်ဟု သိမြင်လာသည်။ လွန်ခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေည ဤတရားဒေ သနာကိုဟောပြောသည့်အချိန်ကစလို့ ကျွနု်ပ်သည် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လည်း အားနည်းမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ထင်မိသည်။ ရုတ်တရက်ပါပဲ ဘုရားသခင်က မာကု ၉း ၂၉ ကို ထပ်မံ၍ ဟောပြောစေချင်သည်မှာ ထင်ရှားလာပါသည်။ သို့သော် စာတန်က မူကျွနု်ပ်အား ရှုပ်ထွေးမှုတွေပေးလျက် ထိုသို့မလုပ်နိူင်အောင် အမှုပြုသည်။
လွန်ခဲ့သော တနင်္ဂနွေညက ("အိုဘားမားခေတ်က ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင် ခြင်း") အကြောင်းကို "နှင့်အစာရှောင်ခြင်း" ကို မာကို ၉း ၂၉ တွင် ဖယ်ရှားမထားသင့်သည့်အ ကြောင်းရင် ခြောက်ခုဖြင့် တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်အသစ်များက ထိုစကားလုံးနှစ်လုံး ကို ဖယ်ရှားကြသည်။ ဤအရာကိုဖယ်ရှားသည့် ဂရိကျမ်းစာအုပ်မှာ သိနတောင်စာမူပင်ဖြစ်ပြီး ၄င်းကို Tischendorf ( ၁၈၁၅-၁၈၇၄ ) က အလက်ဇန္ဒားမှ မိုင် ၄၀၀ ဝေးကွာသည့် သိနတောင် ပင်နီဇွဲလားရှိ ကစ်သရင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုနေရာမှာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ ရုပ်လောကကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ၀ိညာဉ်လောကကိုဦးတည်ပြုမူများနှင့်အတူ အောင်မြင်လာရာနေရာဖြစ်သည်။
St. Catherine’s ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အေဒီ ၅၄၈ တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သိနတောင်စာမူကို လက်ရေးစာမူဖြင့် အေဒီ ၃၆၀ တွင် ကူးယူခဲ့ကြသည်။ တနေရာရာ အဖြစ် နိူင်ဆုံးက အလက်ဇန္ဒားထံက တင်ပို့လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရည်ညွှန်းရဟန်တူသည်။ ထိုကျမ်းကို လေ့လာလေလေ၊ ဘုရားမဲဘုန်းကြီးများက "နှင့်အစာရှောင်ခြင်း" ကို ချန်လှပ်ထားကြသည်ကို သိရလေလေဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့အမြင်နှင့်အပ်စပ်မှုမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤကဲ့သို့သောပြဿနာကို ခရစ်ယာန်စိတ်ထား၊ မာရ်နတ်နှင့်နတ်ဆိုး အကြောင်းကို တွေးတောသည့်စိတ်ထားဖြင့် ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါသည်။ "နောက်ဆုံးသောနေ့ ရက်ကာလ" က သိနတောင်စာမူများကို ပြန်၍ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သ လော။ "ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီ" များက ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်တွင် ပြောင်းလဲခြင်းကို အစားထိုးဖို့ ကြိုးစားနေသည့်အချိန်ကာလအတွက် ဤစာမူကို ပြန်၍တွေ့ရှိသည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်သ လော။ ဤစာမူကို ကမ္ဘာနှင့်အဝှက်မြှင့်တင်အသုံးပြုလာနေသည့်အချိန်အတွင်း မာရ်နတ်၏ခံ ယူချက်များနှင့်အတူအသင်းတော်များကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေသည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ် သလော။ "ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီ" သမားများ၏ဖင်နီ၊ ခက်ပ်ဝါဒီများ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့်ကယ်တင်းခြင်း ရရှိခြင်းအယူ၊ မော်မွန်းတို့၏ဘုရားသုံးဆူရှိခြင်း၊ လီဗရယ်တို့၏ကျမ်းစာတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ယေ ဟောဝါသက်သေခံများ၏အလုပ်-ဖြောင့်မတ်ခြင်းအယူ၊ သတ္တမဥပုဒ်အသင်း၏ဥပုဒ်စောင့်ခြင်း ၀ါဒ၊ စသဖြင့် ၁၉ ရာစုအတွင်း နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်လောက်တွင် ၀င်ရောက်လာသည့်အရာအား လုံးသည် တိုက်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သလော။ ဤအချိန်ကာလအတွင်း ဒါ၀င်၏ဆင့်ကဲ့ပြောင်းလဲခြင်း အကြောင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သလော။ ၁၈၅၇-၅၉ တွင်ဖြစ်ပွါးသည့် အနောက်တိုင်းနိူင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးနိူးထမှုသည် Tischendorf က သိနတောင်စာမူကိုပြန် လည်တွေ့ရှိသည့်အချိန်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သလော။ သိနတောင်စာမူ ကိုတွေ့ရှိပြီး "နှင့်အစာရှောင်ခြင်း" စကားလုံးကို ပယ်ဖျက်ကတည်းက အနောက်တိုင်းကမ္ဘာ တွင် နိူးထမှုမရှိတော့ခြင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်ပါသလော။ ထိုအရာတို့သည် မည်ကဲ့သို့ တိုက် ဆိုင်မှုများဖြစ်နိူင်ပါမည်နည်း။ ဤအချိန်ကာလများသည် သမိုင်းတွင် အောထောတောက်ခရစ် ယာန်ဘာသာကိုတိုက်ခိုက်သည့်အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအချို့နှင့်ထိုအနက်မှာ "အစာရှောင် ခြင်း" ဖယ်ရှားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော မာရ်နတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပါတ် သက်ပြီး အထူးသတိပေးထားချက်ကို ကျွနု်ပ်တို့အားပေးထားသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဤသို့ဆိုသည်။
"၀ိညာဉ်တော်သည် အတည့်အလင်း ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည် ကား၊ နောင်ကာလ၌ သြတ္တပ္ပစိတ်တွင် သံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကို ခံပြီး လျှင်၊ မုသာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏ လျို့ဝှက်ခြင်းအား ဖြင့်၊ လူအချို့တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍၊ လှည့်ဖြားတတ် သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၄င်း၊ နတ်ဘုရားတို့စပ်ဆိုင်သော သြဝါဒတို့ ၌၄င်း မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။ ( ၁ တိမော ၄း ၁ )
Dr. Henry M. Morris ကလည်း ဤသို့ဆိုသည်။
"သူတို့၏အရှင်တည်းဟူသော မာရ်နတ်ကိုအစေခံကြသော ဤဝိ ညာဉ်တို့သည် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ယုံကြည်ခြင်းမှ လွှဲ ရှောင်ရန် နောက်ကနေတွန်းပို့သော မျက်မြင်မရသည့်တွန်းအား များပင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ထားချက်မှာ ယောကျ်ားနှင့် မိန်းမအပေါင်းတို့သည် လူစီဖာ သို့မဟုတ် စာတန်၏နောက်သို့ လိုက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း သူတို့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာသည့်နည်း လမ်းများထက် မရိုးမဖြောင့် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသောနည်းလမ်း အားဖြင့် သာလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ " (Henry M. Morris, Ph.D., ထုချေသူတို့၏ကျမ်းလာလေ့လာချက်၊ World Publishers, 1995, စာ- ၁၃၄၅၊ ၁တိ ၄း ၁ မှတ်စု )
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အမြင်ခြင်းမတူကြသော်လည်း Dr. MacArthur က ဤမာရ်နတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် "ခရစ်တော်ပြန်မလာသေးခင်လေးအချိန်တွင် အထွဋ် အထိပ်တစ်ခု" သို့ရောက်ရှိသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ (MacArthur ကျမ်းစာလေ့လာချက်၊ ၁ တိ ၄း ၁ မှတ်စု )
မာရ်နတ်သည် "နောက်ဆုံးသောကာလ" အကြီးမားဆုံးသောမှားယွင်းမှုများ ဖြစ်ကြ သည့် "ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ"၊ ကပ်ဘယ်လီဝါဒ၊ မောမွန်းဝါဒ၊ သတ္တမဥပုတ်အသင်း၊ လီဗရယ်ဝါဒ၊ ယေဟောဝါသက်သေများ၊ ခရစ်ယာန်သိပ္ပံ၊ နှင့်ပြန်လည်အသက်သွင်းသည့်မွတ်စလင်ဝါဒတို့၏ "နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်ထားသည့် မမြင်နိူင်သည့်တွန်းအားများဖြစ်ကြပါသည်။" မာရ်နတ် တို့က ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်တို့၏လက်ထဲတွင်ရှိသည့် တန်ခိုးကြီး သောလက်နက်ဖြစ်သည်ကို ကောင်းကောင်းသိခဲ့ကြသည်။ မာရ်နတ်တို့က မာကု ၉း ၂၉ နှင့် မဿဲ ၁၇း ၂၁ တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း၏အစွမ်းတန်ခိုးနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ် မှုကို ကျွနု်ပ်တို့အားပြောပြသည့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသောနေရာများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များသာမရှိလျှင် ခရစ်တော်၏နှုတ်မှထွက်လာသည့် အစာရှောင်ခြင်း နှင့်ဆိုင်သည့် တိုက်ရိုက်သွန်သင်ချက်သည်ကျမ်းပိုဒ်ရှိမည်မဟုတ်။ ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် "နှင့်အစာရှောင်ခြင်း" ကိုပယ်လိုက်လျှင် အဘယ့်ကြောင့်အစာရှောင် သင့်သည်၊ မည်သို့အစာရှောင်သင့်သည်ဟူသော တိကျသည့်သွန်သင်ချက်မျိုးမရှိတော့ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏အသင်းတော်များသည် "နှင့်အစာရှောင်ခြင်း" ကိုဖယ်ရှားကြသည်တွင် အားနည်း ပြီး တန်ခိုးလည်းမရှိဖြစ်လာသည်မှာ တိုက်ခိုင်ပဲလား၊ ကျွနု်ပ်က ထိုသို့မထင်ပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါ။
အရင်အချိန်ကာလများတွင် သင်းအုပ်များက မာရ်နတ်များသည် မှားယွင်းသောဘာ သာတရား၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်ကြပါသည်။ အစောပိုင်းကာ လများတွင် တရားဟောဆရာများက စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးများသည် တခါတရံဝင်ရောက်ပူးကပ် နိူင်သဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အနိူင်မယူနိူင်ဟု နားလည်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်၏ဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းဆီသို့ပြန်လှည့်ကြသည်။ "ဤသို့သောနတ်မျိုးသည် အစာရှောင် ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းမှတပါး မထွက်နိူင်ပါ။" (မာကု ၉း ၂၉ ) ၁၉ ရာစု၏ဒုတိယရာစုဝတ်တွင် ဧဝံဂေလိသမားများနှင့်အဓိက တရားဟောသူများက ဂျွန်ဝယ်စလီသည် ( ၁၇၀၃- ၁၇၉၁ ) က " အချို့သော မာရ်နတ် (နတ်ဆိုး) များကို တမန်တော်များက အစာမရှောင်ဘဲနှင်ထုတ်နိူင်ကြ သည်"၊ သို့သော် "ဤသို့သောနတ် ( မာရ်နတ်) သည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းမှတ ပါး မသွားလိုပါ" ဟုဆိုသည်ကိုလည်း သိကြပါသည်။ ဤနေရာတွင် အရှိန်ပြင်သောပဌနာကို ထပ်လောင်းပေါင်းထည့်သည့်အချိန်တွင် အစာရှောင်ခြင်း၏ထိရောက်မှု၏သက်သေကို တွေ့ နိူင်ပါသည်။" (ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ၀ယ်စလီ၏မှတ်စု၊ အတွဲ ၁၊ Baker Book House, ၁၉၈၃ ပုံနှိပ်၊ မဿဲ ၁၇း ၂၁ မှတ်စု )
ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူများအားလုံးဖြစ်ကြသည့် မာတင်လူသာ၊ မဲလ်လင်ချီထွင်၊ ကယ်လ်ဗင်း၊ ဂျွန်နော့စ် တို့အားလုံးသည်လည်း အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။ ဘိုင်ယန်၊ ၀ှုိက်ဖီးလ်၊ အက်ဝက်စ်၊ ဟို၀ဲလ်ဟာရီစ်၊ ဂျွန်ဆင်နိူက်၊ ဒံယေလရိုလင်း၊ မက်ခ်ချီယန်၊ နက်လဲယ် တွန်၊နှင့်အခြားအခြားသော တရားဟောဆရာများသည်လည်း အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်း ခြင်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ယခုတွင် Dr. Lloyd-Jones ၏စကားကို "အသင်းတော်သည် မူယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေကြပြီး ပျက်စီးနေကြသည်။ သူတို့သည် အိပ်၍ပျော်နေကြပါသည်။ တိုက် ပွဲ (စာတန်နှင့်အတူ) ကို မထီလေးစားလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., ခရစ်ယာန်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲ၊The Banner of Truth, ၁၉၇၆၊ စာ- ၁၀၆ )
"ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း" အမှုကိုပြုရန် ခရစ်တော်၏ညွှန်ကြားချက်မှာ နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွက်သာ အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ပြောင်းလဲခြင်း အထူးသဖြင့် ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းများအတွက်၊ နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ဖြစ်သမျှအ ကြောင်းသည့်ခက်ခဲသည့်သဘောရှိပြီး ၄င်းတို့အားလုံးတွင် အစာရှောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန်လို အပ်ပါသည်။ Dr. Lloyd-Jones က "ကျွနု်ပ်တို့၏ရန်သူ၊ စာတန်သည် အများအပေါ်လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်သည်ကိုအချက်ကို ကျွနု်ပ်တို့သည် နားလည်သဘောပေါက်ရမည်။ ကျွနု်ပ်တို့ သည် အစွမ်းတန်ခိုးကြီးမားပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်တန်ခိုးများဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက်တာအတွက်တိုက်ခိုက်နေရမည်အကြောင်းကို နားလည်ရပါမည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အစွမ်းသတ္တိကြီးမားသောရန်သူနှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ကြပါသည်။ (တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလေ့ လာခြင်း၊ အပိုင်း ၂၊ Eerdmans ၊ ၁၉၈၇၊ စာ- ၁၄၈ )
ကျွနု်ပ်တို့သည် ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ စာတန်၏တွန်းအား သည် အမြဲကြီးထွားတိုးတက်နေပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ပျောက်ဆုံးသူများအဖို့ ဆုတောင်း သော်လည်း အကျိုးမရှိ။ သူတို့သည် ပြုမိသောအပြစ်များကိုပင် သိလာနိူင်သည်အထိမဖြစ်နိူင် ပါ။ ခရစ်တော်လိုအပ်သည်ဟုပင် မထင်ကြပါ။ ခရစ်တော်ထံသို့လာရန် သူတို့ငြင်းပယ်နေကြ သည်။ သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် မှောင်မိုက်နေသည်။ ၀ိညာဉ်ရေးရာကိုသိနားလည်နိူင်သည့် အရာတစ်ခုလုံးသည် အမှောင်ဖုံးနေသည်။ ဆက်လက်ဆုတောင်းသော်လည်း ဘာမျှဖြစ်မလာ ပေ။ လူအနည်းသာဘုရားကျောင်းလာပြီးနေထိုင်ကြသည်။ အရှုံးပေးခြင်းလို့သာ ကျွနု်ပ်တို့မြင် ရသည်။ သို့သော် စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။ သာ၍များပြားသောအရာဖြစ်လာပေမည်။ Dr. Lloyd-Jones က ဤသို့ဆိုိသည်။
"ဤအရာကျွနု်ပ်တို့အသက်တာတွင် ဖြစ်မဖြစ်အတွက် အရမ်းအံ့ သြမိတယ်၊ ကျွနု်ပ်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်းအကြောင်းကို ဆင် ခြင်ဖို့ကောင်းပါသည်။ မဟုတ်ပေဘူးလား။ ထိုအရာသည် ကျွနု်ပ် တို့အသက်တာထဲက ယိုထွက်လာသည့်သဘောရှိသည်။ ခရစ် ယာန်အတွေးအခေါ်ထဲကလည်း ယိုထွက်လာသည့်သဘောရှိပါ သည်။" ( တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလေ့လာခြင်း၊ အပိုင်း ၂၊ စာဝ ၃၄)
၀ယ်စလီညီအစ်ကိုများသည် ဆုတောင်းပြီးအစာရှောင်ကြသည်တွင် ဤသို့သောအရာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ချာလ်သည် အစ်ကိုဂျွန်၏လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရသည်။ သို့သော် ချားလ်ဝယ်စ လီသည် တရားဒေသနာဟောသဖြင့် လူများစွာပြောင်းလဲလာသည်ကို အချိန်များစွာတွေ့ရ သည်။ ချားလ်ဝယ်စလီသီချင်းဆိုသည့်အချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာ သည်ဟု မခံစားမိဘူးလား။
ယေရှု! ကြောက်ရွံခြင်းများကို ဖယ်ရှားလို့သွား၊
(“ထောင်ပေါင်းများစွာသောစကားဖြင့်ချီးမွမ်းသံ”၊ ချားလ်ဝယ်စလီ, ၁၇၀၇-၁၇၈၈၊
သံဇဉ် “ ကျွနု်ပ်၌ပွင့်လင်းစွာထားပါ။”).
ယေရှု၊ ကျွနု်ပ်ဝိညာဉ်ချစ်နှစ်သက်ရာ၊ ကိုယ်တော်၏ရင်ခွင်ထဲခိုနားပါရစေ၊
စမ်းရေနားမှာရှိစဉ်၊ မိုးသက်မုန်တိုင်း အမြင့်ဆုံးချိန်သို့ရောက်စဉ်ပင်၊
ကွယ်ကာပါ၊ ကျွနု်ပ်သခင်၊ ကွယ်ကာပါ၊ မိုးသက်မုန်တိုင်းကျော်လွန်သည်ထိ၊
("ယေရှု၊ ကျွနု်ပ်ဝိညာဉ်ချစ်သောသူ"၊ ချားလ်ဝယ်စလီ ၁၇၀၇- ၁၇၈၈ )
ဟေရှာယ ၅၈ ကိုကြည့်ကြပါစို့။ Scofield ကျမ်းစာတွင် စာမျက်နှာ ရ၆၃ ဖြစ်သည်။ ဟေရှာယ ၅၈ အပိုဒ်ငယ် ၆ ဖြစ်သည်။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဖတ်ကြပါစို့။
"ငါနှစ်သက်သောအစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊ မတရားသောအချည် အနှောင်ကိုချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညဉ်းဆဲခံရသော သူတို့ကို လွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းဘိုးရှိသမျှကို ချိုးခြင်းမဟုတ်လော့။"
(ဟေရှာယ ၅၈း ၆ )
အားလုံးထိုင်နိူင်ပါပြီ။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို သင်တို့၏ကျမ်းစာအုပ်တွင် မျဉ်းသားပါ။ ထိုကျမ်းပိုဒ်က မှန်ကန်သောအစာရှောင်သည့်နည်းလမ်းကိုပြသည်။ ခရစ်ယာန်များလုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသ ခင်အလိုတော်ရှိသောအရာကို ပြသပါသည်။ အလွတ်ကျက်မှတ်စေလိုသည်။ အသစ်သော ကျမ်းပိုဒ် ဟေရှာယ ၅၈း ၆ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်အလိုကျ အစာရှောင်ပါ။
Arthur Wallis က "အစာရှောင်ခြင်းက ကြားဝင်သူ (ဆုတောင်းပဌနာပြုသူ) ကို ချုပ် နှောင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်၏ဆုတ်ကိုင်မှုတွင် လွတ်မြောက်စေရန် အတင်းအကျပ်ဖြင့် စာတန်ကိုကိုပြုစေသည့်တိုင် ဖိအားကျန်ရှိနေရန် ခွန်အားပေးတော်မူမည်။၄င်းမှာ ဘုရားသခင် က စာတန်၏လက်မှ ကယ်ချွတ်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။" ( Arthur Wallis, ဘုရားသခင်ရွေး ချယ်သောအစာရှောင်ခြင်း၊ ၂၀၁၁၊ စာ- ၆၇ ) မလာချီတွင် ကျမ်းပိုဒ်များကို အလွတ်ရပြီးသော သူများအား ဟေရှာယ ၅၈း ၆ ကို အခုကျက်မှတ်စေလိုသည်။
လာမည့်စနေနေ့တွင် ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်တွင် အစာရှောင်ခြင်းရှိပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ သည် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ချပြလိုပါသည်။
၁။ သင်၏အစာရှောင်ခြင်းကိုလှို့ဝှက်ထားပါ။ (အတတ်နိူင်ဆုံး) သင် သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများဆီသွားပြီး (ဆွေမျိုးများ) အစာရှောင် ကြောင်းကို မပြောပါနှင့်။
၂။ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ တမန်ဝတ္ထုအချို့ကိုလည်း ဖတ်ရှု ပါ။(ဖြစ်နိူင်လျှင် အစကဖတ်ပါ။)
၃။ စနေနေ့အစာရှောင်စဉ် ဟေရှာယ ၅၈း ၆ကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပါ။
၄။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဆုတောင်းခြင်းကိုနားညောင်းသောအားဖြင့် အစာရှောင် ခြင်းကို အလေးအမြတ်ထားပေးရန် ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါ။
၅။ မပြောင်းလဲသေးသောလူငယ်များအဖို့ဆုတောင်းပါ။(နာမည်ပြောပါ) ဟေရှာယ ၅၈း ၆တွင် မိန့်ဆိုသောအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန် ဘုရား သခင်အား ဆုတောင်းပါ။
၆။ ပထမဆုံးအိမ်အလည်အပတ်သွားခြင်းသည် နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂ နွေတွင်လည်း ဖြစ်နိူင်ရန် ဆုတောင်းပါ။ ဖြစ်နိူင်လျှင် နာမည်နှင့်ဆု တောင်းပါ။
၇။ နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေ-မနက်နှင့်ညနေပိုင်း တွင်ဟောကြားမည့် တရားဒေသနာကိုပြသရန် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါ။
၈။ အလည်အပတ်သွားခြင်း- ကျွနု်ပ်တို့လူငယ်အဖွဲဆုတောင်းခြင်းတွက် သာ၊ ဆုတောင်းပါ။ ( လူသုံးယောက်ရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားလျှင် ဂျွန် ဆယ်မြူရယ် ကာဂျန်နှင့်တွေ့ဆုံပါ။
၉။ ရေများများသောက်ပါ။ တစ်နာရီလျှင် တစ်ခွက်စီသောက်ပါ။ အရည် သောက်မယ်ဆိုရင် ဆုတောင်းအစပိုင်းတွင် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သောက်ပါ။ နူသောအရည်၊ အချိုရည်များ စသဖြင့် မသောက်ပါနှင့်။
၁၀။	သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သံသယဖြစ်လျှင် အစာမရှောင်မှီ ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ပါ။ ( အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ Dr. Kreighton Chan သို့မဟုတ် Dr. Judith Cagan တို့နှင့်တွေ့နိူင်ပါသည်) သွေးပေါင် တက်တာ စသဖြင့် အစီအစဉ်သိပ်မကျဘူးဆိုလျှင် အစာမရှောင်ပါ နှင့်။ စနေနေ့ကို ဤတောင်းဆိုချက်များအတွက် ဆုတောင်းရုံအ တွက်သာအသုံးပြုပါ။
၁၁။	သင်၏အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို သောကြာညနေစာ စားပြီး သည်နှင့်အစပြုပါ။ စနေနေ့ညနေပိုင်း ၅း ၃၀ တွင် အသင်းတော်၌ ထမင်း စားသည့်အချိန်တိုင်အောင် သောကြာနေ့ညနေစာ စာပြီး သည်နောက်ပိုင်း အဘယ်အရာကိုမျှ မစားပါနှင့်။
၁၂။	ဆုတောင်းရန် အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာ ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်တွင် ရှိကြသည့်လူငယ်များ ပြောင်းလဲလာကြရန် ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ အမြဲရှိနေကြမည့်လူငယ်များရောက်ရှိလာရန်အ တွက်လည်း ဆုတောင်းရပါမည်။
အားနည်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုလွတ်မြောက်စေသူ၊ လေးလံသောအပြစ် ကိုဖြေလွှတ်သူမှာ ယေရှုခရစ်တော်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ စာတန်၏ဖိနှိပ်ခံရသူများလွတ်မြောက် ပြီ။ စာတန်၏လေးသောထမ်းဘိုးများလည်း ကျွတ်သွားပြီ။ ယေရှုခရစ်သည် ထိုသို့သောလုပ် ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်အား ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးရန်၊ လူသစ်များနှင့်အသင်းတော်ကလေးများကြားပျောက် ဆုံးနေသောသူများအား ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပေးရန် ဘုရားသခင်ထံပါးတွင် အစာရှောင်ဆု တောင်းကြပါစို့။ ဤတရားဒေသနာကို သင်တို့ဖတ်ရှုရနိူင်အောင် မိတ္တူဆွဲပြီး ပေးလိုက်ပါမည်။ ပြန်ဖတ်ပါ။ စနေနေ့ သင်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းသည်အချိန်တိုင်းတွင် အချက် ၁၂ ချက်ကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုပါ။
ယခု မပြောင်းလဲသေးသော သင်တို့အတွက် စကားလက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်ပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အပြစ်၏အခကိုပေးရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူပြီ။ ထို့ကြောင့် သင်၏အပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းကိုမခံရ။ ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောအခါ ကိုယ်ကာယခန္ဓာအသွေးအသားအားဖြင့်ထမြောက်တော်မူသည်။ သင့်အား ထာဝရအသက်ကို ပေးရန် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် တတိယကောင်းကင်သို့ပြန်လည်တက် ကြွပြီး ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင် ထိုင်တော်မူသည်။ သူ့ထံပါးသို့ ဆုတောင်းခြင်းအား ဖြင့် သင်ရောက်ရှိလို့လာနိူင်သည်။ သင်ကို အပြစ်နှင့်တရားစီရင်ခြင်းမှ ကယ်ချွတ်မည်။ ဘုရား သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ အာမင်..။ ဒေါက်တာ Chan ကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပေးပါအုံး။
အောက်ပါအချက်သည် သိနတောင်စာမူနှင့်ပါတ်သက်ပြီး "သံချောင်းလေး" ဖြင့် ရယူသည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ "သန့်ရှင်းသူများအဖွဲ့" နှင့်ပါတ် သက်ပြီး လုပ်ဆောင်ထားခြင်းမှ ရယူထားသည်။ http://www.puritanboard.com/showthread.php/81537-Sinaiticus-is-corrupt
အောက်ဖော်ပြပါအချက်သည် Tischendorf က ဂိုတက်သိနစာမူကို တွေ့ရှိပုံသ မိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
၁၈၄၄ခုနှစ်၊ ဆန်ဆိုနီဘုရင် Frederick Augustus ဘုရင်၏လက်အောက်တွင် ခရီးသွားသည့်အခါ Tischendorf သည် သိနတောင်ပေါ်ရှိ စိန့်ကစ်သရင်းတောင် သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်။ ဤနေရာတွင် မီးဖိုအလင်းအတွက်အဆင်သင့်လုပ် ဆောင်ထားသည့်ခြင်းတောင်းအပြည့်စာရွက်တွင်ရှိသည့် ဟောင်းနွမ်းသားဟန်ရှိ သည့်စာရွက်စာတမ်းအချို့ကိုလေ့လာရင်း ကောက်ထုတ်ပြီး ၄င်းတို့သည် ဆက် ထူးဂျင်းများ၏စာမူလေးဆယ့်သုံးချပ်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ King James ကျမ်းစာခုခံသူများ၏ရန်သူအချို့တို့က စာမူကို "အမှိုက်ပုံးထဲ" ကတွေ့ရှိခြင်းမ ဟုတ်၊ အရှိအတိုင်းတွေ့ရှိထားသည်ဟု စွဲမြဲစွာယုံကြည်ကြသည်။ ထိုအချက်မှာ Tischendorf တင်ပြသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ "ကျွနု်ပ်သည် ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး စာရွက်စာတမ်းဟောင်းနှင့်ပြည့်နေသောခြင်းတောင်းကို ငါသိမြင်သည်။ ဤကဲ့သို့ သောအရာအပုံနှစ်ပုံကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤစာပေများကြားတွင်တွေ့ ရှိရန် သူတို့၏အံ့သြမှုကားအဘယ်နည်း။"(သိနတောင်စာမူစူးစမ်းရှာဖွေမှုအချက်၊ စာ- ၂၃ ) Tischendorf က ကိုတက်သိနစာမူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အချိန်တွင်ရှိ သည့် ဂျွန်ဘူဂွန် သည် ရှေးစာမူများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန် စိန့်ကစ်သရင်းသို့ ကိုယ် တိုင်ကိုယ်ကျအလည်အပတ်သွားခဲ့ပြီး စာမူများသည်" အမှိုက်ခြင်းထဲတွင်ရှိနေ သည်" ဟုသက်သေခံထားပါသည်။ (The Revision Revised ၊ ၁၈၈၃၊ စာ-၃၁၉၊ ၃၄၂ )
ထို့ကြောင့် အောထိုဒေါက်အယူဝါဒရှိသူများသည် လွန်ခဲ့သောအချိန်များစွာက ဤအမှားများစွာပါရှိသည့်စာမူကို ဖယ်ရှားပြီး ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတွင် အသုံးပြု ထားခြင်းမရှိရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်မှာ ထင်ရှားလှပါသည်။ သို့သော် Tischendorf သည် ၄င်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မြှင့်တင်ပြီး မူရင်းလက်ခံသောစာ စောင်ထက် ပို၍မှန်ကန်သောစာမူတစ်ခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ ဆက် လက်၍ ဤစာမူသည် ၄ရာစုလောက်ကဖြစ်သည်ဟု ပင်ဆိုလိုက်သေးသည်။ သို့ သော် ထိုအရာမှာ ၁၂ ရာစုထက်စောပြီးတွေ့ရှိသည်ဟူသော သက်သေကို ရှာမ တွေ့နိူင်သေးပေ။
ကိုတက်သိနစာမူများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဤအချက်များကို ဆင်ခြင်ကြည့် ပါ။
၁။	သိနစာမူကို မတူညီသောဇဒ္ဒုကဲသုံးဦးကရေးသားထားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူ ပေါင်းများစွာက ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ (ထိုအရာမှာ ဗြိတိန်ပြတိုက်ရှိ H. J. M. Milne နှင့် T. C. Skeat တို့က တိုးချဲ့စာမူ၏နိဂုံးဖြစ်ပြီး ၄င်းကို ကိုတက်စ်သိနာ စာမူဇဒ္ဒုကဲများနှင့်အမှားပြင်ဆင်သူများက ထုတ်ဝေပုံနှိပ်ကြပါသည်၊ လန်ဒန်၊ ၁၉၃၈) Tischendorf က ဤစာမူတွင် အမှားပြင်ဆင်ချက်ပေါင်း ၁၄၈၀၀ ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ( David Brown, The Great Uncials, ၂၀၀၀) ၁၈၆၄ခုနှစ်တွင် ကိုတက်စ်သိနစာမူကို၏ပြည့်စုံသောစာစောင်ကိုထုတ်ဝေသူ Dr. F. H. A. Scrivener က "ကိုတက်စ်သည် စုစည်းထားသောဂုဏ်အင်္ဂါ၏ပြင်ဆင်ချက်များ ပါ၀င်ကြောင်း၊ ပြုပြင်သူဆယ်ဦးထက်မနည်းက ဆောင်ယူလာပြီး အချို့တို့သည် စာမျက်နှာတိုင်းတွင် ဖြန့်ကျဲထားသည်၊ အခြားကန့်သတ်ထားသောအရာများ သည် စာမူ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသီးခြားဖြစ်စေသည်၊ ဤအရာများစွာတို့သည် ပထမရေးသားသူတို့နှင့်အတူ တစ်ပြိုင်တည်းတည်ရှိနေသည်ဟု သက်သေခံ သော်လည်း သာ၍ကြီးမားသောအပိုင်းကို ခြောက် သို့မဟုတ် ခုနှစ်ရာစုတည် တည်ရှိသည် ဟုဆိုသည်။" ထို့ကြောင့် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာလွန်လေပြီးသော ဇဒ္ဒုကဲများက သိနတောင်စာမူကာ သန့်ရှင်းမှန်ကန်သည့်မူရင်းစာမူအဖြစ်တင်ပြ မထားကြကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ခေတ်သစ်မူရင်းစာဝေဖန်သူများက လှို့ဝှက် ဆန်းကြယ်သောအရာဖြစ်သည်ဟု အဘယ့်ကြောင့် ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိကြသ နည်း။
၂။ ဂရုမစိုက်ခြင်း၏ကြီးမားသည့်အရေအတွက်မှာ ကူးယူခြင်းနှင့်အမှန်ပြင်ထားခြင်း တို့တွင်ထင်ရှားလှပါသည်။ "ကိုတက်သိနစာမူသည် မှားယွင်းမှုများနှင့်တူညီမှု များလုံးဝမရှိသည့်အရာဖြင့် ၀ုိင်းရံထားသော်လည်း ပထမအရေးကြီးမှုတွင် ပုံမှန် မဟုတ်သည့်စာရွက်စာတမ်းထက်တော့ပျော်ရွင်စရာကောင်းပါတယ်။ အခြေအ နေများစွာတွင် ၁၀၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀ စကားလုံးများကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ချန်ရစ်လို့ထားခဲ့ ကြပါသည်။ စာလုံးနှင့်စာသား၊ စာကြောင်းတစ်ခုလုံးတို့သည် နှစ်ကြိမ်ထက်မ နည်းရေးသားထားကြသည်၊ သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်ပြီး ချက်ချင်းပင် အဆုံး သတ်ဖျက်ကြသည်။ စကားစုများကိုလည်း ပယ်ထားချန်ထားကြသည်။ အ ကြောင်းမှာ တူညီသောစကားလုံးများဖြင့် အဆုံးထိတိုင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပေ တည်း။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ၁၁၅ကြိမ်ထက်မနည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။" (John Burgon, The Revision Revised) ကိုတက်သိနစာမူကိုကူးယူသော ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဘုရားသခင်၏သစ္စာရှိသောသူများဖြစ်၍ ကျမ်းစာကို ရိုသေလေး မြတ်သူများဖြစ်ကြောင်းမှာ ထင်ရှားပါသည်။ သိနစာမူတွင်ရှိသည့် ခရစ်ဝင်ကျမ်း တွင် များစွာသောစကားလုံးများကို ချန်ထားပြီး ဂရိ စာမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၄၅၅ လောက်ရှိပါသည်။ (Burgon, စာ- ရ၅ )
၃။	မာကု ၁၆း ၉- ၂၀ ကို ကိုတက်သိနစာမူတွင် ချန်လှစ်ထားခဲ့သည်။ သို့သော် ၄င်း သည် မူရင်းစာဖြစ်သော်လည်း ဖျက်ထားကြသည်။
၄။	ကိုတက်စာမူတွင် ကျမ်းပယ်များလည်း ပါ၀င်သည်။ (အဲဒရာ့စ်၊ တိုဗစ်၊ ဂျူဒစ် ၁ နှင့် ၄ မက္ကဘီး၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ဒေသနာစာစောင်) နှင့် မှားယွင်းသောစာမူနှစ်ခုဖြစ် သည့် ဗာနဗစာစောင်နှင့် ဟာမ၏သိုးထိန်းစာအုပ်လည်း ပါ၀င်သည်။ ဗာနဗစာ စောင်သည် မှားယွင်းသည့်အယူများပြည့်ဝသောစာစောင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအား ဖြင့် အာဗြဟံသည် ဂရိစကားတတ်သည်။ ဗတ္တိဇံသည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် စသဖြင့်ပါ၀င်သည်။ ဟာမသိုးထိန်းစာစောင်သည် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်သည် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူသည့်အချိန်တွင် ဆင်းသက်လာသည် ဟု မှားယွင်းသောအရာကိုတင်ပြထားသည့် ဘုရားမဲ့ ရေးသားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၅။	နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကိုတက်သိနစာမူသည်( ကိုတက်ဗက်တီကစိနှင့်အတူ) ဘု ရားမဲ့ဝါဒီတို့၏လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်ကို ထင်ရှားစာပြသသည်။ ယောဟန် ၁း၁၈ တွင် "တပါးတည်းသောသားတော်" ကို "တပါးတည်းသောဘုရားသခင်" ပြောင်း လဲသုံးနှုန်းထားပါသည်။ သူတို့သည် မှားယွင်းသောအယူသဘောတရားကို စွဲ ကိုင်ပြီး ယောဟန် ၁း၁ က "ဘုရားသခင်" နှင့် ယောဟန် ၁း ၁၈ က "သားတော်" ကြားရှိမှန်ကန်သောဆက်စပ်မှုကို ချိုးဖျက်ကြပါသည်။ တပါးတည်းသောသား တော်အဖြစ် လူ့ဇာတိခံယူထားသူမှာ သားတော်ပင်ဖြစ်သည်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မာကု ၉း ၁၇- ၂၉
"အမှန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်"၊ (Howard A. Walter ၁၈၈၃-၁၉၁၈) ရေးစပ်သည်။